Multimedia – Bogga 3 – Windows – Vessoft
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo loona beddelo faylasha, muuqaalka maqalka iyo fiidiyoowga, wuxuuna taageeraa qalabka horumarsan ee lagu fulinayo.
software The si ay u gudbiyaan faylasha music, video clips ama playlists dhexeeya iPhone, iPod, iPad iyo computer labada dhinacba.
MP3Test – barnaamij aad u fiican oo lagu baaro feylasha waxyeellada leh ee qaabka MP3 iyo u muuji si qalad ah muuqaal ahaan.
Codsiyada Koodhka ee loogu tala galay Windows – oo ah nooc cod iyo maqal ah ayaa kaa caawinaya inaad dib ugulaabato qaabab badan oo warbaahinta faylasha ah oo aad la macaamisho ciyaartoy kasta.
LG PC Suite – waa aalad loogu talagalay maareynta waxyaabaha aaladda laga helo LG Electronics. Waxay taageertaa kaydinta iyo cusboonaysiinta darawalada qalabka.
DivX – xirmo ayaa loo dejiyay in lala shaqeeyo feylasha iyo faylalka fiidiyoowga ah. Software-ka ayaa adeegsanaya teknolojiyada si uu ugu dhexgalo faylasha warbaahinta ee leh heer isku buuq ah.
CyberLink PowerDirector – barnaamij softiweer ah oo tayo sare leh oo loogu talagalay agabyada fiidiyowga ee heer xirfadeedka. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay qalab fara badan oo aasaasi ah iyo qalab gaar ah oo loogu talagalay tafatirka.